गर्भवती नर्सले संसार छाडिन् अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियोले सबैलाई रुवायो !(भिडियो सहित) – Yuwa Aawaj
जेठ २४, २०७८ सोमबार 519
एक गर्भ`वती महिला जो सन्ता`नलाई जन्मदिन पुरै त|यारी अवस्थामा थिइन् । एक छोरा थिए । श्रीमान र उनी दोस्रो सन्तानको आगमन`को तयारीमा थिए ।
तर उनीहरुको जिवनमा नसोचेको घटना भयो । भारतमा फैलीएको महा`मारीले गर्भव`ती महिला`ई पनि छोयो। उनी आफै स्वास्थ्य`कर्मी पनि थिइन् । त्यसैले स्वास्थ्यका बारेमा पनि सचेत थिइन् ।
तर भाइरसले उनला`ई पनि छोयो । लक्षण देखिए`पछि उनी अस्पताल भर्ना भइन् । उनले अस्पताल भर्ना भएपछि एउटा भिडियो बनाइन् । अहिले त्यो भिडि`यो सा`माजिक सञ्जा`लमा निकै भाइर’ल भएको छ । उनले निकै सन्देश`पूर्ण कुरा रेकर्ड गराएकी छन् ।
यो भारत`को घटना हो । उनले भनेकी छन्, ‘हेल्लो ए’भ्रिवान । मैले यो भि`डियो निकै मुस्किलसँग बना`इरहेको छु । म तपाईहरु सबैला`ई बताउन चाहन्छु कि कोरोना`लाई हल्का नलिनुस् ।
निकै खरा’ब लक्षण छ । म राम्रोसँग बोल्न पनि सकिरहेकी छैन । तर आफ्नो सन्देश सबै समक्ष पुर्याउन चाहन्छु । कृपया बाहिर नि`स्किएका बेला, मानिसहरुसँग कु`राकानी गर्दा, जहिले पनि मास्क लगाउनुस् ।’
यी कुरा दिल्लीकी ती महिलाले आफ्नो अन्तिम भिडियो`मा भनेकी हुन् । यी महिलाले कोरोनाको ल डा इँ हारिसकेकी छिन् । तर, आफ्नो अन्तिम भिडि`योमा उनले मानि`सहरुलाई सम्हा`लिएर बस्न आग्रह गरेकी छिन् । उनका पति रविचाव`लाले आफ्नी श्रीमती र नजन्मि`एको शि’शुको
मृ’त्यु भएको जानका`रीसहित यो भिडियो सन्देश ट्वीटरमा पोस्ट गरेका छन् । यी महिला`को नाम दी`पिका हो । ११ अप्रिलमा उनको को|रोना रिपोर्ट पो’जेटिभ आएको थियो । १७ अप्रि|लमा उनले यो भिडियो रेकर्ड गराएकी हुन् । त्य|तिबेला उनको स्वास्थ्य बि’ग्रँदै थियो ।
अन्त्य, २६ अप्रि`लमा कोरो`नाबाट हार खाएर संसार छाडिन् । दीपि`का आफ्ना साढे तीन वर्षका छोरा र पतिलाई छा|डेर बिदा भएकी हुन् । दीपि`काका पति रविले ९ मेइमा यो भिडियो ट्वी`टरमा शेयर गरेका हुन् ।
जहाँ उनले लेखेका छन्, ‘उनी पुरै तरिकाले मा`तृत्वका लागि समर्पि|त थिइन् र आफ्नो नजन्मि`एको बच्चा`सँगै स्वर्ग गइन् । र, साढे तीन वर्षका बच्चालाई छाडेर गइन्, ह्याम्पि मदर्स डे दीपिका !
Prevताइपेई सँगको जितपछि यस्तो भन्छन् किरण, अन्जन र पुजन !
Nextरवि लामिछाने भन्नुहुन्छ : आइपरे यु’द्ध त ल’ड्न सकिन्छ, राजनीति त के हो र ! (भिडियो सहित)